Sunday May 28, 2017 - 03:32:47 in Somali News by Super Admin
Waagacusub.net 1- Farmaajo wuxuu baarlamaanka uga khudbeeyay iney dhaqan xun tahay Madaxweyne iyo Ra'isulwasaare maalin kasta diyaarad saaran oo bishii seddex mar baxaayo,wuxuu ballanqaaday ineysan taas dhici doonin oo safaradda dibadda u diri
Waagacusub.net 1- Farmaajo wuxuu baarlamaanka uga khudbeeyay iney dhaqan xun tahay Madaxweyne iyo Ra'isulwasaare maalin kasta diyaarad saaran oo bishii seddex mar baxaayo,wuxuu ballanqaaday ineysan taas dhici doonin oo safaradda dibadda u diri doono Wasiir Khaarijiga laakiin isagga toban safar ayuu galay seddex bil gudahood ?
2-Farmaajo wuxuu baarlamaanka hortiisa ka sheegay inuu boqol kun dollar siin doono qofkii qarax sheego, inuu dadka dhaawacmay dibadda u qaadi doono,inuu dhisi doono guryaha la qarxiyay maadama masuuliyadda dowladda tahay iney amaanka sugaan,.seddex ballanqaad hal mid kama fulin.
3- Farmaajo Wuxuu khudbadiisii ugu horeeysay ku sheegay in dalka Somalia dowlad laheyn 26 sano taas oo ka dhigan adeerkeey Siyad Barre kadib wixii dowlad dalkaan ka jiray ma aqoonsani.
4- Farmaajo wuxuu 33 qof oo u dhashay Hawiye kuna dhamaaday qarax ku tilmaamay Waxmagarato ,isagoon cudur daar ka bixin ilaa iyo hadda,sida uu ku sheegay khudbadiisii Caleemasaarka.
5- Farmaajo wuxuu Ra’isulwasaaraha Somalia u magacaabay nin la yiraa Xasan Kheyre oo ka mida Saamileeyda Soma Gas & Oil ,kuna eedeeysan inuu Al-Shabaab maalgelin dhaqaale siin jiray sida ku cad Warbixinta Qaramadda Midoobay soo saartay iyo Warbaahinta Caalamka.
6- Farmaajo wuxuu Gudoomiyaha gobolka iyo Duqa Muqdisho u magacaabay Thabit Abdi oo ahaay qunsulkii Safaaradda Somalia ee Mareykanka,isagoo gacantiisa ku saxiixay in dib loo celsho boqolaal dhalinyaro Somalia oo dalkaas tahriib ku galay,weliba wuxuu ka xaday lacagtii sahayda loo siiyay sideey afkooda ku sheegeen.
7- Farmaajo wuxuu la taliyahiisa dhinaca Amniga u magacaabay Xuseen Damuumaaye oo ahaay Xogheynta gaarka ee Jeneral Gabre ,kana tirsan Basaasiinta Ethiopia.
8- Farmaajo wuxuu Taliyaha Nabadsugidda iyo Sirdoonka Somalia u magacaabay Abdullahi Sanbaloolshe oo ka mida basaasiinta Ethiopia kaas oo horey baarlamaanka Somalia u diiday inuu ka mid noqdo gollaha Wasiiradda ama Taliye Sirdoon kadib markii uu xiray Xildhibaano Qaran oo xasaanad leh.
9- Farmaajo mudadii uu joogay Villa Somalia waxaa gubtay Suuqa Bakaaro, Suuq Bacaad ,waxaa dhacay 30 qarax,waa ku dhintay,la dilay 503 qof laakiin maalin qura kama dirin tacsi, mana ka hadlin.
10 - Farmaajo iyo Naagtiisa waxeey xirteen Tuutaha Ciidanka,wuxuuna ku dhawaaqay xaalad dagaal laakiin maalin kadib ayuu Emirate-ka u duulay iyadoo aysan jirin ilaa maanta tilaabo uu qaaday .
Tobankaas dhacdo ee ku qoran Sooyaalka maalmahiisa Madoow qofkasta oo isku daya inuu dafaro ama qiil u raadsho wuxuu ka dhigan yahay Qalfoof maran oo laabtiisa qabyaalad iyo naxli madoobeysay.
Inaan runta sheegno, inaan shacabka Soomaaliyeed iyo beesha Caalamka la wadaagno xaqiiqooyinka jira waxaan ugu dhawaanaa alle Swt,waxaana ugu samafalnaa shacabka la dulmay.
Ugu dambeeyn nasiibdaradda Somalida heeysato waxeey tahay iney u sacbiyaan qof ay og yihiin inuu musuqmaauq ku soo baxay kaas oo ugu khudbeeynaa inuu musuqmaasuqa la dagaalami doono.
Ogoow DABEEYSHU GEEDDAHA UMMA RUXDO INEY CIYAARSIISO